Simple, Compound and Complex Sentences - Myanmar Network
Posted by Missy Candy on August 10, 2016 at 17:36 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဝါကျရိုး Simple sentence၊ ပေါင်းစပ်ဝါကျ Comound sentence နှင့် ဝါကျ ရော Complex sentence
A simple sentence containsasubject andaverb. It showsasingle complete thought which can stand on its own.
ဝါကျ ရိုး တစ် ကြောင်း တွင် S ကတ္တား & V ကြိယာ တို့ ပါ ရှိ သည်။ ပြည့် စုံ ရိုး ရှင်း သော အချက် တစ် ချက် ပါ ရှိ သော ကြောင့် ဝါ ကျ ရိုး ဟု သတ် မှတ် နိုင် သည်။
1. The boy studied his lessons.
S တစ် ခု နှင့် V တစ် ခု သာ ပါ ပြီး အ ကြောင်း အ ရာ တစ် ခု တည်း ကို သာ ညွှန်း သော ကြောင့် Simple sentence ဟု သတ် မှတ် သည်။
2. Daw Hla's feminine daughters cooked and ate the coconut noodle.
Simple sentence ဟု ဆို တိုင်း တို တောင်း သော ဝါ ကျ ဟု မ သတ် မှတ် သင့် ပါ။ဝါကျ ရိုး များ ရေး ဖွဲ့ ရာ ၌ နာမဝိ သေ သန Adjective ပါ ထည့် သွင်း ရေး သား နိုင် ပါ သည်။ အထက် ပါ ဝါ ကျ တွင် [ cooked] နှင့် [ate] ဟူ သော V နှစ် ကြိမ် ပါ ရှိ သော် လည်း ကိစ္စ တစ် ခု အ ကြောင်း အ ရာ တစ် မျိုး တည်း ကို သာ ညွှန်း သော ကြောင့် ဝါကျ ရိုး ပင် ဖြစ် သည်။
A compound sentence has two independent clauses. An independent clause isapart ofasentence that can stand alone because it containsasubject andaverb and then expressesacomplete thought. Basically,acompound contains two simple sentences.
These independent clauses are joined byaconjunction .... such as ... for, as, since, and, but, however, yet...
Compound ဝါကျတွင် သီးသန့် ရပ် တည် နိုင် သော ဝါကျ ပြတ် နှစ် ခု ပါ ရှိ သည်။ ဤ ဝါ ကျ တို တစ်ခု စီ တိုင်းတွင် S နှင့် V တစ် ခု စီ ပါ ရှိ သ ဖြင့် သီးခြား ရပ် တည် နိုင် ပြီး ဝါ ကျ ပြတ် တစ် ခု စီ သည် ကိစ္စ အကြောင်းအရာ တစ် မျိုး တည်း ကို ဖော် ပြ သော ပင် မ ဝါကျ ၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်။
1. The pickpocket had stolen watches so he ran away when he saw the police.
အထက်ပါ ဝါကျတွင် so ၏ တစ်ဘက်စီ တွင် ရှိ သော The pickpocket had stolen watches နှင့် He ran when he saw the police သည် သီးခြား ရပ် တည် နိုင် သော ဝါကျ များ ဖြစ်သည်။ ဤ သို့ သီးခြား ရပ် တည် နိုင် သော ဝါကျ နှစ်ခုကို ဝါကျဆက် ဖြင့် ဆက်ထား ၍ ပေါင်းစပ် ဝါကျ ဖြစ်လာသည်။
1. Tin Tin takes physical exercise as she wants to lose weight.
2. Lin Lin triedalot however he gained only four distinctions.
A complex sentence is an independent clause joined by one or more clauses. A dependent clause either lacksasubject oraverb or hasasubject andaverb that does not expressacomplete thought. A comlex sentence always hasasubordinator ( as, becuse, since, after, although, when) or relative pronouns (who,that, which).
Complex ဝါကျ ဆိုသည်မှာ သီးသန့် ရပ်တည် အဓိပ္ပာယ် ဖော် ဆောင် နိုင် သော ပင်မ ဝါကျ ပြတ်တွင် မှီခို သော လက် အောက် ခံ ဝါကျတို တစ်ခု သို့ မ ဟုတ် ပို၍ ပေါင်းစပ် ထား ခြင်း ပင် ဖြစ် သည်။ ဤ မှီ ခိုသော ဝါကျ ပြတ် တွင် S မပါ ခြင်း သို့မဟုတ် V မပါခြင်း သို့ မဟုတ် S + V ပါ သော လည်း အဓိပ္ပါယ် မပြည့်စုံခြင်း အမျိုးမျိုး ဖြစ် နိုင် ပါ သည်။ Complex ဝါကျ များ တွင် ပင် မဝါကျ ပြတ်ကို တွဲဆက် ရန် Subordinate conjunction များ အ ဖြစ် after, because, as, since, though, although, when အစရှိ သည် တို့ကို ထည့် သွင်း ရေး သား နိုင် သကဲ့ သို့ who, whom, which, that, when, where, how စ သော Relative pronouns များ ကို လည်း အသုံး ပြု လေ့ရှိ ပါသည်။
1. After studying for long hours, Thiri went out to get relaxation.
Thiri went out to get relaxation ဆိုသော ဝါ ကျပိုင်း သည် Sentence တစ်ခု အ နေ ဖြင့် သီးခြား ရပ်တည် နိုင် သော ပင် မ ပိုင်း ဖြစ် သော် လည်း After studying for long hours တွင် S မပါ ရှိ သော ကြောင့်
ပင်မ ဝါကျ ကို အမှီ ပြု သော ပင်မ ဝါကျ မှ S ကို ပင် ပြန် လည် ညွှန်း ဆို ပါ သည်။
2. During the last few years, there has been an enormous increase in the number of shops, stores and supermarkets which provide facilities for self-service.
ဤ ဝါကျတွင် which provide facilities of self-service သည် အမှီ ပြု Extended clause သို့ မ ဟုတ် ရှေ့ တွင် ရှိ သော shops, stores and supermarkets ဆိုသည့် Noun phrase ကို အထူးပြု သော Adjective အစု အဖြစ် ရပ် တည် ပါသည်။ အထက်ပါ စာစု ကို ဖြုတ် ကြည့် လျှင် လည်း ကျန် စာ စု သည် သီး ခြား ရပ် တည် နိုင် သည်။
သီး ခြား ရပ် တည် နိုင် သော ဝါ ကျ ပိုင်း စာ စု နှစ် ခု ပါ ပြီး အမှီ ပြု ဝါ ကျ ပိုင်း တစ် ခု ဖြင့် Compound-complex ဝါကျ များကို ရေးသား နိုင် ပါသည်။
1. After the students had sat for the examination, they asked for permission from their parents and they went to the playground.
If we remove the dependent clause “after the students had sat for the examination", we haveacompound sentence. The dependent clause makes this sentence compound-complex.
Permalink Reply by htaylim on September 2, 2016 at 15:27
Permalink Reply by U Aung Kyaw on November 5, 2016 at 8:30